Qeybti sedaxaad ee sheekadi Afrika Love |
Qeybti sedaxaad ee sheekadi Afrika Love
order Tadalis SX online, buy Zoloft. sildenafil reviews, zithromax reviews. Cialis soft FRUIT no rx, buy Zoloft online. Qeybtii sedexaad
Habeenkii aan soo kala tagnay aniga iyo xaliimo wuxuu ahaa habeenkii nolosheyda aan u furay baal mugdi ah, qof dunidan jecel inuu noloshiisa geliyo mugdi ma jiro laakiin waxbaa dhaliyay.
Waxaan wacay subixii wiilka aan saaxiibka nahay si aan ugu qisoodo wixii igu soo kordhay, “kulankii Xaliimo ka dib waxaa la iga qabtay wadnaha” ayaan ku celceliyay dhowr jeer laakiin sxbkey isagoo fahmeyn hadalkeyga ayuu igu sabar siiyay “waa astaanta jaceylka”. Waxaan arin aad iigu cusub qof aad isbarateen isbuuc gudihiisa, in wadnaha laga qabanayo.
Hadaan fasiro wadnaha, maaha xanuun wadnaha kaga dhacaayo, laakiin waqtiga Xaliimo ii baahato waa mid aad u garaacmo ilaa aan xabada gacanta saaro si aan u celiyo wadnaha soo dhacaayo. Aniga ma eheyn mid fahmi karaa arinkaa, waxaa kaloo igu soo kordhay habeenkaa in maskaxda ey delete gareysay wixii ku jiray, family iyo jaceylba.
Waxaa yaalaha kale ee nolosheyda burburiyay waxaa ka mid ah, Xiliga aan xaliimo la joogo waa saacado ama maalin dhan, markaan guriga ka soo baxo lilaahi ma xasuusan karo wixii aan ka wada hadleyney.
Xaliimo waxay kaalin libaax leh ka qaadatay burburka nolol uu ku jiray Omar, hadaan ka fogaado waxaa bilowdo wadnaha inuu u shaqeeyo si zaaid ah aan neefsan kari waayo.
Waxaa isoo wacay officeka shaqaaleysiinta iina sheegeyn inaan shaqo helley, kana heley meel u jirta magaalada 1 saac, isla waqtigaa waxaan wacay Xaliimo si aan ugu hambalyeeyo shaqada aan heley, sidii ayaan isku diyaariyey inaan bilaabo shaqadaa.
Xaliimo waa qof aad u xirfadeysan, waa qof howl ku jirta, haddii isbarashadaas ey ahaan laheyd kedis ama mid iska dhacay waxba ma ahateen, ee wuxuu ahaa mid si wanaagsan looga shaqeeyey, dad xirfadeysane ey hareero socdeen micnaha ey howsha la wadeen, danbi ayay igu tahay hadaan iraahdo qofkaas ayaa la waday laakiin howsha waa socotay.
Waxaan ku miitalayaa ama faahfaahin ka bixinaya sida ey howshaas eheyd, qofkii arkay adigoo jiifa ayaad ku riyootay riyo aad xun, waxaa meel aan kaa fogeyn ku sheekeysanaya walaalahaa ama waalidkaaga, waad maqleysaa iney iyaga yihiin markaa ayaad isku dayeysaa inaad u qeyliso ama ey ku caawiyan laakiin qeyladada waa mid eysan maqleyn oo adiga kugu kooban, qeylo iyo orodba aadan awoodin niyada ayaan iska leedahay tolow mey hurdada kaa kiciyan.
Ilaah ayaa marqaati ii ah, waxaan galay nolol mugdi ah, qofkastana wuxuu ii ahaa cadow, waxyaalaha badankood ee aan sameynayo aniga ayaa la yaaban, waxaa igu yaab badnaa, anigoo ku jira shaqadii aan muddo sugayay ayaa waxaa mar qura la iga qabtay isla wadnihii waxaan codsaday in doctor la i geeyo ku yaala isla shaqada, isla markiiba waaley baaray dhinac kasto waxba waaleyga waayay, “maxaa kugu dhacay sideeda wax u jiraan”?
Marqaadi waxaa ugu wanagsan inaad Alle ka dhigato, ilaahey ayaa marqaati iga ahaa waxa aan ku hadlayo aniga ayaanan garaneyn, oo waxaan ahaa qof wadnaha laga haayo oo meel looga yeerayo.
Maalinkii xigtay waxaan kulanay Xaliimo, waxay iga codsatay inaan baro gabadha jaceylkeyga ah, ma fahmin ujeedadeeda ma hadli kari oo ma awoodo inaan fikir ka bixiyo ama sidaan wax u dareemayo aan sheego, ma jirin qof dadka iigu sokeeyo oo bal mar uun ii gargaaro, habalaha la daganaa ayaa igu tiri” berigii hore ninyahow waxaad eheyd qof dagan sheeko wanaagsan dabeecad wanaagsan maxaa kaa qaldan”? Waa kuma qofka jawaabta bixinayo, Waxaan si niyada ah ka baryay ilaahey in Riyada aan ku jiro ka kaco si aan ugu laabto, Omarkii hore qosolka badnaa, dooda badanaa, kaftanka badnaa.
Riyo maaha waa real, waxkasta waxay u socdan si qaldan, wiil aan isku qol eheyn oo ahaa qof ahlu salaad, hard workna ahaa ayaa igu yimid guriga anigoo quraan aqrisanyo, waxba ma uusan dareemin howshiisa ayuu iska qabsaday, inakstoo uu isna same question i weydiiyay “ninyahow nin qatar ayaa agteyda ka eheyd gabar la shukaansado heerkan miyuu kula maraa”? Yaa u jawaabayo qofkii waa qof daah saaran yahay.
Waxaan go’aansaday inaan dhaashane iibiyo ujeedada aan u iibinayo lama garanayo, qofkasta wuu arkaa wax weyn iney iga qaldan yihiin laakiin ma jirin qof iga caaein karo howshan la soo habeeyey ee sida wanaagsan looga qeyb qaatay.
Jaceylkii hore aan lahaa, ayaa hadaladeeda ugu danbeeyey ahaayeen hadaad guri cusub dagtay waan kuu imanaa hadiyadane waan ku siinayaa.
Callka waa mid aniga la igu controlo, durbadiiba telefonka ayaa soo dhacay waa Xaliimo inaan u tago, second kama soo wareegin inaan u tago, sheekeysi ka dib waxay isoo bixisay hadiyad same hadiyad jaceylkeyga igu tiri waan kuu keenaa, ma awoodo inaan ogaado sida ey wax u dhacayan, waayo waan hurdaa waxkasta waa ii riyo,
Isla waqtigaas waxay iga dalbatay inaan soo tuso guriga cusub aan dagay, sidii ayaan yeeley gurigii ayaan geeyey.
Xaliimo waa qof howsha ey wado maaha mid keligeed ey wadi karto laakiin waxay leedahay xidido badan oo meelo badan kala jooga,
Waxaan aaday shaqadii isla waqtigii sidii ayaa wadnaha la iiga qabtay ilaa aan markaan dhihi kari waayo doctor hadane i geeya, waxaan dhigay qalabkii aan ku shaqeynayay si aan u aado halka wadnaha looga wacayo, waxaan tagay shaqada xafiiskeeda waxaan ku dhahay waan ka tagay shaqadan, waxay i weydiiyeen bal inaan sheego sababta keentay inaan uga tago laakiin jawaab ma siinin, waxaana noqday qofkii ugu horeyey ee shaqo ka tago sabab la’aan.
Gaari ma heysto oo aan magaalada ku aado, inta badan waxaa aan sameyn jirnay qof ayaa lacag la siinayaa todobaadkii si uu shaqada noo geeyo anagana aan u save gareyno gawaarideena.
Waxaan fadhiistay banaanka qofka ii yimaado “ilaahow adaa marqaati ah ma hayo jawaab, Ilaahow riyo ka dhig waxaan dhacaya aanan awooda u leheyn” ayaan niyada ka duceysanayay isla markiiba dhalinyaro ayaan isaga tagay oo aan ku sugay inta shaqaalaha ka soo baxayan. haddii shaqo laga tagayo waxay ku fiicneyd waqtiga la wada baxaayo inaan raaco asxaabteyda.
Maalmo ka dib Xaliimo howlaheeda iskuma darsana waxkastana sidii ey ahaayeen ayay u socdeen, shaqooyin kale ayaan raadsaday, ilaahne waa ii sahlay, xaliimane waxaa ey heshey shaqadii aan ka soo tagay. Isla goobtii ayay u guurtay.
Jaceylku waa wax jiro aadmiga marba si ayuu u soo maraa wayo aniga jaceyl baan wax ka aqanaa, laakiin sidan ma eheyn jaceyl iyo wax la mid, mar mar ayaad maqleysaa labo asxaabteyda ah oo sheekeysanyo midba midka kale wareysanyo telefon ahaan, ” war ninyahow ninkaan maad la talisan” aniga waan maqlayaa waayo sameecada ayaa furan, sababta aad buu iigu damqay, awoodiisa ayaa eheyd inuu la soo hadlo wiilka aan la daganaa.
Mudo ka dib waxaan isku raacdnay goob lagu iibiyo mobilda si aan ugu iibiyo telka markaa ugu qaalisan, sidii ayaan ugu iibiyay, isla waqtigaas waxaan paswor uga dhigay magaceyga iyo numbaro sidaas ayaan mudoo ku soconay.
Habeenkasta waxaan taganahay albaabka guriga ay dagan tahay, markii ey isalanto ama wajiga gacanta iga mariso waxaan dareemaa in xanuunkii tagay, ma badbaadayo hadaan ka fogaado mana la joogi karo.
Waxaan ku fikiray arimo badan oo waali ah laakiin waxaa isoo baxday inaan badasho numbarada inaan sheegin halka aan joogo,
Anigoo bilaabay aqriskii quraanka. Ayaa waxaa isoo wacay wiilkii aan saaxiibka eheyn iina sheegey in la i raadinayo hablo ey is afdhaafeen oo qeylinayo bal inuu sheego halka uu igu qariyay, ee maxaan sameeyaa ayuu yiri madama aan saaxiibkey ku kalsoonahay, hadana markasta aan sheekada furo waxaa bilowda wadnihii deg deg ayaan u wacay xaliyay qilaafkii, waxaan ku jiraa xabsi, waan calaacalayaa, waan riyoonayaa hadmaan ka kici doonaa xoriyadeyda heli doonaa.
Ilaah mahadii waxaan shaqo ka heley gobol kale oo aad uga fog goobtii farxad iyo reyreyn.
Lakin ma noqon mid aan ku bogsaday weli waxaa ila socdo xanuunkii wadnaha, wadnaha markan leyahay wuxuu u jiitamaa halka Xakiimo ku nooshahay, anigana waxaan is lahaa waad soo fogaatay,
Maalin bil ramadan tahay oo aan soomanahay Waxay iishegtay iney doctor aadeyso uusan jirin qof i wadayo anigane sidii ayaan yeeley oo anigaa geeyey anigoo fasax ka soo qaatay shaqadii waxaan soo socday 4 saac ku dhawaad waxaan imaaday gurigii si aan u wadi doctorka, waan geeyey intii aan ku jirnay gudaha hospitalka waxaa iska soo daba dhacayo callal alaabtane waa mid ey aniga iiga tagtay, dabcan howshan waxay ka mid eheyd howlaha ey xaliimo wadatay, kama qaban telka anigoo silent ka dhigay, xaliimana gudaha ayaa la geliyay. Indhaheyga ayaa waxay qabteen msg uu soo diray qofkii isagoo leh “macaanto waan ku soo wacay xagee joogtaa”
Isla waqtigiiba aniga u jawabay” macaane hospital ayaan ku jiraa ee markan ka soo baxo ayaan ku soo wacayaa”
Maybe qofka msgka uso diraya wa gabadh ama wiilba lakin suasha ayaa ah, sidee dareemi kartaa qof shaqadada aad u soo kansashay oo fasax aad ka qaadatay si aad Xaliimo doctor u geysid, maalin soone ey tahay oo cadceedan kulushahay?
Yes waad xanaaqi laheyd lakin aniga waan riyoonayaa ma ihi qof iqtiyaar u leh waxa dhacaya.
Markii aan ka soo baxnay ayaan u shegey arinkii waxba kama eysan dhihin, waxaan istaajiyay gaariga waa waqtiga aniga nolosheyda aanan ilaawin for ever.
Waxaan istaagnay halka laga iibiyo dawada oo loo yaqano CVS, waxaan qabsaday jilbaha waxaa iga timid ilin taasi ilaahey ayaa ii marqaati ah oo hadan been sheego alle cadaabta ha igu fogeeyo, waxaan ka codsaday iney i fasaxdo oo iga sii deyso xabsiga.
wey iga diiday daqiiqado ayaan baryay waxana ii sheegtay inaan ka shaleynaayo hadey i fasaxdo, ane waan ku adkeystay.
Ilaahey ayaa iga hadalsiiyay maa hee ma garteen xalkeyga, waxay itiri hadaad rabto inaan ku fasaxo i raac sidii ayaa la isku raacay, waxaa la tagay gurigii afurka ka dib, waxay isiisay wax aanan garaneyn dhadhankooda isla waqtiga wan dawaqmay, saacado ayan dawaqsanaa markiiba waxay itiri waad bixi kartaa, aniga waxaa caado ii eheyd inaan sujuuda ka dhunkado mar walbo aan baxayo, lakiin bixidii aan baxay dib uma soo fiirin la yaabka dunida.
Waxaan u farxay farxad qof beni aadam ah uu farxo, waxaan ka kacay hurdadii subxana laah, waxaan soo xasuusatay hooyadey aanan la hadlin 8 bilood waxaan kaloo soo xasuustay gabdhii aan 7 sanno wada soconay.
Waxaan ku laabtay gobolkii aan ka imaaday maalintaa xigtay ma soomin, safar ayaan ku ahaa.
Waxaan gaaray halkaan ka imid, maalinkaa ayaa iigu danbeyey wadnaha la iga qabto, laakiin maalmo yar ayuu i hayay anigoo quraan aqristay. Lakin waxaan la hadlay Xaliimo oo qosleysa si cajiib ah oo msgkeyga wuxuu ahaa.
Ugu horeen aad ayaad ugu mahadsan tahay abaalka aad ii gashay, abaalkaasna ma ilaawayo, inkastoo aad i lug goysay family iyo jaceylba iyo nolosheydaba aad qatar gelisay.
Maalinkaa ayaa iigu danbeysay maqal iyo aragti. Anigane inkastoo iga muuqato diif iyo daal ayaan dib u bilaabay noloshii hore,
Arimaha aan la yaabay ee aan weli iga harin ilaa quraan weyn ka hello wuxuu yahay waxaa gobolkii aan daganaa kula kulmay gabadh ka timid halkii Xaliimo ku nooleyd iyadoo ii sheegtay iney baahideyda dhinac kasto dabooli doonta, gurina keligeed leedahay eyna isoo dhaweyn doonta, sirma qabe ale ayaa u sahan ah.
Waxaan isla waqtigii aan tagnay Nashville baeay wiil aan sxb nahay oo iga codsaday inaan baro madama aan aniga ku jirin, wiilkaasna wuxuu ahaa dadka ahlu salaadka ah oo aan ilaah dartiis u jeclaa, waanadiisa.
Waxaan bilaabay inaan la hadlo ama xirirkii jaceylkeyga uga faalooda wixii i qabsaday iyo xabsigii aan galay,
Codsi qeybta kale beri insha allah waan dhameynaa, waa qeybta aniga iyo dubai….